Indlu ye-log ye-Idyllic kunye nendawo yokubuyela
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguElse Merete
I-77m2 yendlu yelog ebekwe kwindawo yeholide yekhaya kwi-cul-de-sac. Kukho igadi enkulu enebala lebhola ekhatywayo encinci kunye neendlela kunye nebhentshi ejonge ulwandle kwesi siza esikhulu (2600m2).
Indlu ibekwe 500 m ukusuka edolophini, 750 m ukusuka elunxwemeni kunye nemizuzu engama-30 ukusuka Skagen. Kukho i-terrace enkulu ngaphambili nangasemva kwendlu, ukuze ukonwabele ilanga imini yonke. Kukho ne-carport enegumbi lezixhobo, apho kukho i-chest freezer, imidlalo yebhola, izitulo zasegadini, (i-charcoal) grill njl.
Maninzi amaxhama, amaphixa kunye neentaka kulo mmandla.
Usapho lisebenzisa indlu njengendawo yokuphumla, yiyo loo nto kungekho TV okanye i-Intanethi. Kwakhona akukho dishwasher, kodwa umatshini wokuhlamba.
Ekhitshini kukho umatshini wekhofi, isitovu / i-oven, i-microwave, iketile, i-toaster, i-toaster, ifriji kunye nefriji encinci (isifuba sefriji kwi-shed). Kukwakho nezinto ezisisiseko zobukoloniyali njengetyuwa, ipepile, iswekile, umgubo, izihluzi zekofu nokunye.
Iphepha lendlu yangasese, isepha yesandla, iitawuli zeti namalaphu ezitya zibandakanyiwe kwixabiso.
KODWA iitawuli, ilinen yebhedi kunye neshampu kufuneka kuziswe!
Kukho iiduvethi nemiqamelo yabantu aba-6 ngokuqinisekileyo (+ neengubo ezongezelelweyo). Kukho kwakhona isitovu seenkuni esibaswayo kwigumbi lokuhlala kunye neenkuni zokukhanyisa xa kunokwenzeka ukuba kubanda. Kodwa iinkuni ezongezelelweyo zesitovu kufuneka uzinakekele. Inokuthengwa kwiindawo ezininzi kwisixeko.
Kwidolophu yaseTversted kukho ivenkile ethengisa ukutya (Spar) ukongeza kwiivenkile zokutyela ezininzi, iivenkile zokutyela, iivenkile zamandulo kunye neevenkile ezisetyenzisiweyo kunye neegalari kunye neevenkile zobugcisa. Kwakhona kunokwenzeka ukuqesha iibhayisekile esixekweni.
Umbuki zindwendwe ngu- Else Merete
Abanini bafumaneka ngefowuni kulo lonke ixesha lokuhlala.
UElse Merete yi-Superhost